स्थानीय तहमा शिक्षाका दुईवर्ष : हिजोका शिक्षकबाट भोलिका शिक्षा कसरी दिने ? | Educationpati.com
२०७६ असार ५ गते २२:४१मा प्रकाशित
काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षकमा सुधार नभएसम्म शिक्षामा सुधार गर्नै नसकिने बताएका छन् । २० वर्ष पुराना शिक्षकले, नयाँ विद्यार्थीलाई सिकाउनै हम्मे परिरहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
बिहिवार आजको शिक्षा साप्ताहिकले आयोजना गरेको स्थानीय तहका शिक्षाका दुईवर्ष, उपलब्धि र चुनौती विषय अन्तक्रियामा बोल्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सन्तोष चालिसेले समाज अगाडि बढेपनि शिक्षकले उही बीसवर्ष पुरानो ढाँचामा सिकाइ रहेका बताए ।
'शिक्षकहरु २७ वर्ष देखि पढाइरहेका छन् । विद्यार्थी किन फेल भए भनेर सोध्यो, यस्तै हो भनेर भन्छन् ।' नगर प्रमुख चालिसेले भने– 'विव्यस निरिह छत्यस्ता शिक्षकलाई न कार्बाही गर्न सक्छ नत अवकाश दिन सक्छ ?' नगरले पनि शिक्षकलाई कार्बाही नगर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको सुधार कहिल्यै गर्न नसकिने उनको भनाई थियो । गएको २ वर्ष शिक्षकलाई सम्झाउँदैमा बितेको भन्दै नगरप्रमुख चालिसेले अब ठाउँका ठाउँ कार्बाही गरिने स्पष्ट पारे ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव खरेलले शिक्षक र कर्मचारीका कारण २ वर्षमा शिक्षामा चाहेर पनि कुनै सुधार गर्न नसकेको बताए । 'शिक्षकहरु अल्छि भए, कर्मचारी निकम्मा ।' नगरप्रमुख खरेलले भने । 'केही नजान्ने अनुभव वीहिन कर्मचारी शिक्षामा आउने, हाजिर नगराउँ सरकारलाई असहयोग गरेजस्तो हाजिर गराउँ पारै लाग्दैन ।' पछिल्लो दिनमा बल्ल केही बिसेक कर्मचारी आएका छन् । स्थानीय समुदायका ५० प्रतिशत बालबालिकालाई सामुदायिकमा भर्ना गराउने गरी काम भइरहेको खरेलले जानकारी दिए ।
सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिका पठाउन आग्रह गर्दा उनीहरुले २५ वर्ष पुराना शिक्षकहरुलाई सार्न भनेपछि एकैपटक ५४ शिक्षकहरुको पालिकास्तरीय सरुवा गरिदिएको बताइन् । विव्यसमा समस्या देखेपछि सबै विद्यालयको विव्यस अध्यक्ष परिवर्तन गरिदिएको उहाँको भनाइ थियो । '२ विद्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरे तर, हाम्रो असल उद्देश्य देखेपछि अदालतले पनि मुद्दा जिताइदियो'– बस्नेतले भनिन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले नराम्रा शिक्षक सरुवा गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने बरु उनीहरुलाई सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताए । सरुवा गर्दैमा चौपटै सुधार नहुने भन्दै पौडेलले नराम्रा शिक्षक कहाँ पठाउने, कसले लिन्छ भन्दै प्रश्न गरे । अझैपनि आधा स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी पुर्याउन नसकिएकाले समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।